Hatraiza ny tombam-bidy azo amin'ny Travel Travel?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Hatraiza ny tombam-bidy azo amin'ny Travel Travel?
Firenena maro no miasa am-pahamendrehana amin'ny fametrahana paompy fitsangatsanganana miaraka amin'ny firenen-kafa indrindra fa ireo olona vita vaksiny ao an-tsaina.
Amin'ny COVID-19 izay mbola mirenireny erak'izao tontolo izao, dia mety misy ny miboiboika fitsangatsanganana nefa ilaina inona izany?
Na dia efa misy aza ny fivezivezena amin'ny fitsangatsanganana, noho ny paikady fanafoanana viriosy tena mpandala ny nentin-drazana any amin'ny ankamaroan'ny firenena, dia tsy ampiasaina ireo gelula ireo.
Ny onjam-piaramanidina nisesisesy tany Eorôpa dia nanalalaka ny resaka rehetra momba ny fipoahan'ny dia lavitra ivelan'ny faritry ny Vondron Eropeana.
Ny minisitry ny fanatanjahantena sy fizahan-tany any Thailandy Phiphat Ratchakitprakarn dia nanasongadina fifanakalozan-kevitra vaovao amin'ny governemanta Singapore momba ny fipoahan'ny dia. Nasongadiny fa i Singapore dia manana traikefa amin'ny bubble tahaka an'i Australia sy New Zealand, na dia tsy mandeha aza izy io amin'izao fotoana izao noho ny paikadin'ny fanafoanana viriosy ao Aostralia. Na ny tranga coronavirus tokana aza any dia mety hiteraka fanidiana ny sisintany anatiny ary koa fanelingelenana poakaty iraisam-pirenena.
Mario Hardy, tale jeneralin'ny Pacific Asia Travel Association, dia mino fa i Thailand sy Vietnam no mety ho fototry ny baomba mandehandeha manaraka noho ny fananan'ireo firenena roa tonta faran'izay manana virus marobe. Nisy ihany koa ny fifampiresahana tsy ara-potoana niaraka tamin'i Taiwan izay nanokatra bubble de voyage niaraka tamin'ny nosy Pasau fanta-daza Palau.
Na izany aza, lavitra ny vintana mety hanokanan'i Thailand ny volo misy fitsangatsanganana amin'ny firenena misy fizahantany fizahan-tany. Sina sy Russia, izay nanome ny ankamaroan'ny mpitsidika iraisam-pirenena tany Thailand talohan'ny areti-mandringana, dia tsy maika ny handefa ny olom-pireneny any ampitan-dranomasina sao hamerina virus hafa ary koa ny tambin-karama tsy andoavan'izy ireo.
Ny onjam-otrik'aretina nifandimby tany Eoropa dia nanalalaka ny resaka rehetra momba ny fipoahan'ny fivezivezena ivelan'ny sisin-tanin'ny Vondrona Eropeana, fa i Britain kosa dia nametraka izany ho tsy ara-dalàna ny fialan-tsasatry ny tompony pasipaoro. Tsy eo amin'ny latabatra ihany koa ny fifanarahana manokana eo amin'i Thailand sy India satria manodidina ny 80,000 isan'andro ny tranga vaovao ao amin'ny kaontinanta kontinanta.
Ny safidy hafa amin'ny fivezivezena mandeha amin'ny firenena tsirairay dia ny fihenan'ny fotoana, na ny fandaozana, ny famerana ny quarantine ho an'ny mpandeha tsirairay. Ny manampahefana Thai izao dia nampihena ny quarantine fanaraha-maso any amin'ny hotely mpizahatany vita vaksiny manomboka amin'ny 14 andro ka hatramin'ny 7 andro. Ny ankamaroan'ny mpandeha hafa dia hahita fihenam-bidy ho 10 andro, na dia 14 aza no mijanona ao anaty karatra raha toa ka avy amin'ny faritra mikraoba any Afrika na Amerika Latina.
Ny fiheverana an'i Sandbox, izay hialan'ny quarantine mpitsangatsangana vaksiny, dia kasaina hatao any Phuket manomboka amin'ny volana Jolay. Izany dia mihevitra fa farafaharatsiny ny 70 isan-jaton'ny mponina ao amin'ny nosy dia hatao vaksiny mialoha ny basy fanombohana izay, tamin'ny fotoana nanoratana azy, dia tsy tena mazava. Raha mandeha tsara ny zava-drehetra, Pattaya ary faritany maro hafa miorina amin'ny fizahan-tany dia hanana Sandboxes amin'ny volana Oktobra. Ny fidirana tsy misy Quarantine ho an'ireo miditra vahiny vita vaksiny dia kasaina hatao amin'ny Janoary 2022.
Miankina amin'ny anton-javatra maro io tranga azo antenaina io amin'ny fampiharana, indrindra fa ny Thailand (na izao tontolo izao) dia miatrika antokon'aretina marary isan-karazany ankehitriny sy amin'ny faran'ny taona. Ny birao mifandraika amin'ny fahazoana visa Thai any ivelany any amin'ny masoivoho Thai, raha tsy ovaina, dia mbola sarotiny amin'ny fahazoan-dàlana sasany, fa tsy ny rehetra, mitaky fiantohana ara-pitsaboana ankapobeny ary koa COVID. Mbola aloha loatra ny haminavina hoe rahoviana no hiverina indray ny fizahan-tany Thai.
Ny Scandalia momba ny vaksinin'ny EU dia manana mpandresy telo lehibe: San Marino, Russia, ary Sputnik